अन्तर्राष्ट्रिय Archives • Page4of 59 • Nepal's Trusted Digital Newspaperअन्तर्राष्ट्रिय Archives • Page4of 59 • Nepal's Trusted Digital Newspaper
रुसी सेनाले मध्ययुक्रेनी सहर क्रेमेन्चुकमा इन्धन र तेल प्रशोधन केन्द्रलाई ध्वस्त पारेको दाबी गरेको छ । रुसी रक्षा मन्त्रालयले यस्तो दाबी गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनासेन्कोभले युक्रेनमा रुसी ‘विशेष सैन्य कारबाही’ बारे गरिएको एउटा ब्रिफिङमा रुसी सेनाले धेरै सैन्य क्षेत्रमा हमला गरेको जनाएको छ । प्रवक्ता कोनासेन्कोभले भने, ‘रुसी सशस्त्र बलहरूले युक्रेनमा […]
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले रुसले युक्रेनका केही भागमा क्रूरता देखाएको तर आफ्नो युद्धको उद्देश्यमा असफल भएको बताएका छन् । युक्रेन भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले सो धारणा राखेका हुन् । उनले आइतबार किभमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँगको भेट गरेका थिए । विदेशमन्त्रीसँगै रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन पनि युक्रेन भ्रमणमा छन् । युक्रेनले रुसी हमलाको प्रतिकार गर्न अमेरिकासँग सैन्य हतियार […]
चीनको सांघाइमा कोभिडबाट आइतबार एकै दिन ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै सांघाइमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८७ पुगेको त्यहाँको नेसनल हेल्थ कमिसनले जनाएको छ । आइतबार कोभिडका २२ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए । साढे दुई करोड जनसंख्या भएको सांघाइ पछिल्लो समय कोभिड संक्रमणको चपेटामा परेको छ । देशको बृद्ध र खोप नलागाएको […]
२७ हजार डलर पानीको बिल तिरेको विद्यालय
पोखरी मर्मत-सम्भारको जिम्मेवारीमा रहेका कानागावा प्रान्तको योकोसुकाका एकजना शिक्षकले कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्न महिनौँसम्म धारो खुला छाडिदिँदा उनले काम गर्ने विद्यालयले २७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी पानीको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । व्यक्तिगत गोपनीयता कायम गर्न पहिचान नखुलाइएका ती शिक्षकले पोखरीमा ताजा पानीको निरन्तर प्रवाह भएमा त्यसलाई कोभिडमुक्त तुल्याउने ठानेर गत जुनको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको प्रारम्भसम्म धारो […]
केही समयअघिसम्म विभिन्न राष्ट्रबीच चन्द्रमामा पाइला कसले राख्ने भन्नेबारे प्रतिस्पर्धा थियो । तर अब चन्द्रमामा विभिन्न निर्माण कार्य गर्नेमा तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । अमेरिका र चीनबीच चन्द्रमाको विषयमा ठूलो तँछाडमछाड चल्न थालेको छ । हालै चीनले आफू र रुस मिलेर चन्द्रमामा २०३५ सम्ममा एक रिसर्च सेन्टर निर्माण गर्ने बताएको छ । चीनको घोषणाले […]
चीनमा अमेरिकी नागरिकलाई मृत्युदण्ड
चीनको एक अदालतले एकजना २१ वर्षिया युवतीको सुनियोजित ढंगले हत्या गरेको अभियोगमा अमेरिकी नागरिक सादिद अब्दुलमाटिनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यम सीसीटीभीकाअनुसार चेन नामक ती चिनियाँ युवती उनकी प्रेमिका हुन् । झेजियाङ प्रान्तस्थित निन्गवो मध्यवर्ती जन अदालतले निर्णय सुनाउने क्रममा भनेको छ, “सन् २०१९ को जुनमा ती दुईबीच ब्रेक –अप भएको […]
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी नेता भोलिोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट गर्ने भएका छन् । महासचिव गुटरेसले मंगलबार राष्ट्रपति पुटिनलाई मस्कोमा भेट्नेछन् । गुटरेसले विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभसँग पनि भेट गर्नेछन् । पुटिन र लाभरोभसँग्को भेटपछि महासचिव गुटरेसले बिहीबार किभमा युक्रेनी राष्ट्रपति पुटिन र विदेशमन्त्री दिमित्रो कुलेबासँग भेट गर्नेछन् । रूस र युक्रेन […]
बेल्जियमकी एक मन्त्रीले आफ्नो बिरामी पतिको स्याहार गर्न पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेकी छन् । उप प्रधान एवं विदेश मन्त्री सोफी विल्मेसले मस्तिष्क क्यान्सर पीडित पतिको हेरचाह गर्न केही समयका लागि पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि बिरामी पतिको स्याहार सुसार गर्न गर्मी यामको अन्त्यसम्म कामबाट छुट्टी लिन लागेको उनले बताइन् । […]
महिलामाझ किन लोकप्रिय छन् मोदी ?
हरेक सफल पुरुषका पछाडि महिलाको हात हुन्छ भन्ने भनाइ अझै पनि प्रख्यात छ । र, यसैअनुसार हालै सम्पन्न चुनावमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी, भाजपाको सफलताका पछाडि पनि लाखौँ महिलाहरू भएको विश्वास गरिन्छ । केही समय अगाडि गरिएको दुई अध्ययनमा फेब्रुअरी–मार्चमा सम्पन्न चुनावमा भारतीय जनता पार्टीलाई मत हाल्नमा पुरुषहरू भन्दा महिलाको सङ्ख्या धेरै रहेको पत्ता […]
कोरियामा एकै मान्छेको तीन उमेर हुन्छ, कुसरी ?
“तपाईँको उमेर कति भयो?’’ यो एउटा सामान्य प्रश्न हो जसको स्पष्ट उत्तर हुन्छ । तर दक्षिण कोरियामा भने यो प्रश्नको जवाफ त्यति सहज छैन । दक्षिण कोरियामा जन्मिने बित्तिकै शिशु एक वर्षको भएको मानिन्छ । नयाँ वर्ष लागेसँगै उनीहरूको उमेर थप एक वर्ष बढ्छ । त्यसको अर्थ डिसेम्बर महिनामा जन्मेका बच्चाहरूको केही दिनपछि ज्यानुअरीमै […]